ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
၁။ ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့၏ ထူးခြားချက်မှာ ( ဗျာဒိတ်, ဖွားမြင်, ဗောဓိပင်, စံဝင် နိဗ္ဗာန်နန်း)ဆိုသည်နှင့်အညီ သုံးလောက ထွတ်ထား သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနှင့်စပ်၍-
ဤထူးခြားချက်လေးမျိုးတို့နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ထူးခြာချက်လေးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဤနေ့ကို “ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ “ဟုအမွှမ်းတင် ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
၂။ ဤကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် မာရ်နတ်ရန်ကို အောင်မြင်တော်မူသောကြောင့် ဤနေ့ဤရက် ကို “ကဆုန်လပြည့် မာရ်အောင် နေ့ “ အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ စိတ်အစဉ်တွင် စွဲမြဲ၍နေကြပါသည်။
၃။ ဝိသာခါနက္ခနှင့်ယှဉ်၍ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းများကို အကြောင်းပြု၍ ကဆုန် လပြည့်နေ့ ကို “ဝိဆခ်ဒေး” ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ဝိသာခါဒေး ဟုဆိုလိုပါသည်။
၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်ဘုရားဖြစ်သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ကို အာရုံပြု၍ ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ပရိဘောဂ စေတီထိုက်သော ဗောဓိပင်ကို ရေသွန်းလောင်းလေ့ရှိကြပါသည်။
၅။ဗောဓိပင်သည် သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကိုရ၍ ဘုရားဖြစ်တော်မူရာဌာနဖြစ်ခြင်း၊ ဖွားဖက်တော် ၇ ပါးတွင် စာရင်းဝင် ဖြစ်ခြင်း တို့ကြောင့် ထူးခြားသော သစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဤကဲ့သို့ မြတ်စွာဘုရားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်၍ ဗောဓိပင်၌ ရေသွန်းလောင်းခြင်း အစဉ်အလာကို ခေတ်အဆက် ဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါသည်။
၆။ မြန်မာရိုးရာ ၁၂ ရာသီပွဲတော်များအနက် ကဆုန်လ၌ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ရိုးရာပွဲတော် အဖြစ် အစဉ်အလာ သတ်မှတ် ခဲ့ကြ ပါသည်။
၇။ အသနဗောဓိယမထေရ်၏ အလောင်းသည် တိဿဘုရားရှင်၏ ဗောဓိပင်ကို စိုက်ပျိုး ပူဇော် ရသော ကုသိုလ်ကြောင့် နတ် ပြည် ၌ဖြစ်ရခြင်း၊ စကြာမင်း ဖြစ်ရခြင်း၊ အပါယ် ဘေးမှ လွတ်ကင်း ရခြင်း အကျိုးများကို ခံစားရကြောင်း ( ထေရာပဒါန်) ကျမ်းဂန်၌ ဟောကြား ထားပါသည်။
၈။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို နှလုံးသွင်း၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေဖြင့် နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဥဒ္ဒဿစေတီတော်များကို အနေကဇာတင် ဗုဒ္ဓအဘိသေက မင်္ဂလာသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပ၍ ကုသိုလ်အထူးကို ဆည်းပူးလေ့ရှိကြပါသည်။ ကျောင်းကန်ဘုရားသို့ သွား၍ ဒါန သီလ ဘာဝနာအမှုကို ပြု လုပ်၍ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ကို အမှတ်တရ ဆင်နွှဲကြ ပါသည်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 7:55 AM
Ko ZERO said...
Very good for knowledge! Thanks for ur post about Vesak Day to know detail.